EXCEL ကိုအတွက်မဲပုံး FUNCTION ကို - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုအတွက်မဲပုံး function ကိုအသုံးပြုခြင်း
မဲပုံး function ကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်နယ်နိမိတ်ထဲတွင်အခြို့အစေးနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောတစ်ဦးချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အငြင်းအခုံ၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်များအတွက် function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြဿနာများ၏နံပါတ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်သည်အခြားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းငှါ, စံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ်ကိုရှာဖွေညီမျှခြင်း၏အမြစ်များနေရာချထားဖို့ကသုံးနိုင်သည်။ စက္ကူ, ကလောင်နဲ့ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို အသုံးပြု. ထက်အများကြီးပိုလွယ်မဲပုံးဖျော်ဖြေဖို့ Excel ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ။ ဤလျှောက်လွှာထဲမှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
ရွေးချယ်ထားသောခြေလှမ်းဖို့, ဒုတိယအတွင်းအငြင်းအခုံတန်ဖိုးကိုတဦးတည်းကော်လံတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားသောစားပွဲတစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်လျှောက်ထားမဲပုံး - function ကို၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး။ ထို့နောက်တွက်ချက်မှု၏အခြေခံပေါ်မှာကြံစည်မှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကွန်ကရစ်ဥပမာအပေါ်ပြုပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
ကော်လံနဲ့ထုပ်စားပွဲ Create x ကသောကအငြင်းအခုံ၏တန်ဖိုးညွှန်ပြနေသည်နှင့်f(x) အဖွဲ့ဘယ် function ကို၏သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားf(x) = x ကို ^2+ 2xမဲပုံးလုပျထုံးလုပျနညျးအဘို့အ function ကိုမဆိုမျိုးကိုသုံးနိုင်တယ်သော်လည်း။ Set ခြေလှမ်း (H) နှုန်းမှာ 2။ ကနေနယ်စပ် -10 သို့ 10။ ယခုငါတို့ခြေလှမ်းလိုက်နာရန်, ကော်လံအငြင်းပွားမှုများဖြည့်ဖို့လိုအပျ2အခြို့သောကန့်သတ်အတွင်း။
ကော်လံ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်ထဲမှာ "X" ကို တန်ဖိုးအား inscribe "-10"။ ထိုခဏခြင်းတွင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝင်ရောက်။ သငျသညျမောက်၏ခြယ်လှယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားလျှင်, ဆဲလ်အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုပုံသေနည်းသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။
အားလုံးနောက်ထပ်တန်ဖိုးများကိုခြေလှမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း, ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ် 2ဒါပေမယ့် Auto-ပြည့်စုံ tool ကို၏အကူအညီဖြင့်ထိုသို့ပြုမှပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ အတော်လေးသေးငယ်သည် - အငြင်းပွားမှုများ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေး, နှင့်အစေးလျှင်အထူးသဖြင့်ဒီ option ကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအငြင်းခုံ၏တန်ဖိုးပါရှိသည်တဲ့ဆဲလ်ရွေးချယ်ပါ။ tab ကိုစဉ်တွင် "အိမ်"အဆိုပါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖြည့်ပါ"ယင်း setting ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ဖဲကြိုးအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်ဟာ "တည်းဖြတ်ခြင်း"။ ရလဒ်စာရင်းထဲတွင်, action ကို select လုပ်ပါ "တိုးတက်မှု ... ".
တိုးတက်မှု settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ parameter သည် "တည်နေရာ" ကျနော်တို့ရပ်တည်ချက်ကိုဖို့ switch ကိုမသတ်မှတ် "ဟုအဆိုပါစစ်ကြောင်းများခုနှစ်တွင်"ဤကိစ္စတွင်၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုအငြင်းအခုံတန်ဖိုးကော်လံထဲမှာဘဲတတန်းအတွက်အတိအကျနေရာချပါလိမ့်မည်။ လယ်ပြင်၌ "အဆင့်" ကျနော်တို့တန်ဖိုးမသတ်မှတ် 2။ လယ်ပြင်၌ "ကန့်သတ်တန်ဖိုးကို" ကျနော်တို့အရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ 10။ အဆိုပါတိုးတက်မှု start နိုင်ဖို့အတွက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အခုဆိုရင်သင် function ကိုကော်လံအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်f(x) = x ကို ^2+ 2x။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, အောက်ပါပုံစံမှဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုရေးကော်လံမှသက်ဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးဆဲလ်အတွင်းရှိ:
= X ကို ^2+2* x ကို
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အစားတန်ဖိုး x က ကျနော်တို့အငြင်းပွားမှုများနှင့်အတူကော်လံ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်များ၏သြဒီနိတ်အစားထိုး။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝင်ရောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတွက်ချက်မှုရလဒ်ဖော်ပြရန်။
သည်အခြားလိုင်းများအတွက်တွက်ချက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအောင်ကျနော်တို့ပြန်အော်တိုပြီးဆုံးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသို့သော်ဤအမှု၌ကျွန်ုပ်တို့ဝစွာလက်ကိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြီးသားဖော်မြူလာပါရှိသည်သောဆဲလ်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်, ရန် cursor သတ်မှတ်မည်။ ဒါဟာအသေးအရွယ်အစားလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံစံအတွက်တင်ဆက်သည့်ဝစွာလက်ကိုင်, ပုံပေါ်ပါတယ်။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Hold များနှင့်ပြည့်ဝဖို့ကော်လံတစ်လျှောက် cursor ဆန့်။
ဒီစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်, function ကို၏တန်ဖိုးများနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုကော်လံလိုအလြောကျပြည့်စုံလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် tab ကို function ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်း၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့ function ကို၏နိမ့်ဆုံးကြောင်း, ဥပမာ, ထွက်ရှာတှေ့နိုငျ (0) ယင်းငြင်းခုံ၏တန်ဖိုးများမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် -2 နှင့် 0။ ယင်းငြင်းခုံ၏မူကွဲများ၏ကန့်သတ်အတွင်း function ကိုအများဆုံး -10 သို့ 10 ဒါဟာငြင်းခုံဖို့သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးပွိုင့်မှာအောင်မြင်နေသည် 10ထိုအနေသည် 120.
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် Auto-ပြည့်စုံစေရန်မည်သို့
တစ်ဦး tab မှာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စားပွဲပေါ်အခြေခံပြီး function ကိုကြံစည်နိုင်ပါသည်။
လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်အတူ cursor ၏ table ထဲမှာရှိသမျှသောတန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "ထည့်"tool ကို box ထဲမှာ "ပုံကြမ်း" အဆိုပါဖဲကြိုးတွင် button ကို click "ဇယား"။ အပြောင်းအလဲနဲ့ဂရပ်ဖစ်များအတွက်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှုစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်။ အသင့်တော်ဆုံးဟုယူဆအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, ဥပမာ, ဿုံရိုးရှင်းသောဂရပ်ကိုက်ညီ။
ထို့ပြင်ဆန္ဒရှိလျှင်, အသုံးပြုသူသည်ဤရည်ရွယ်ချက် tools တွေကိုအဘို့အ Excel ကိုသုံးပြီး, ကမထိုက်မတန်ကိုမြင်အတိုင်းအချိန်ဇယားကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သင့်အနေစတာတွေ, တစ်ဖွဲ့လုံးကပုဆိန်နှင့်ဂရပ်ကိုသြဒိနိတ်ဒဏ္ဍာရီကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်အမည်ပြောင်း, ငြင်းခုံ၏ line ကို delete ၏နာမတော်ကို add နိုင်ပါတယ်
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုတစ်ဂရပ်ဆွဲရန်ကဘယ်လို
သငျသညျ, ယေဘုယျအားဖြင့်, ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မဲပုံး function ကိုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။ သို့သော်တွက်ချက်မှုအတော်လေးအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နယ်စပ်အငြင်းပွားမှုများလျှင်အလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်း, သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်အကူအညီနဲ့အော်တိုပြီးဆုံး Excel ကို tools တွေကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ထို့အပြင်ရလဒ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာတူညီတဲ့အစီအစဉ်တွင်အမြင်အာရုံတင်ဆက်မှုများအတွက်ကြံစည်မှုနိုင်ပါသည်။